हवाइ यात्राका लागि टिकट खरिदको माध्यम फेरियो, यात्रुलाई फाइदा कि घाटा ? – Rapti Khabar
काठमाडौं,असोज ७, देश भित्रकै हवाइ उडानका लागि काटिने टिकटको भुक्तानी ट्रेन्ड फेरिएको छ। वायुसेवा कम्पनीहरुका अनुसार गएका तीन वर्षदेखि टिकट खरिद तथा भुक्तानीको शैली फेरिएको हो।
देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जहाजबाट जानका लागि टिकट खरिद गर्न ट्राभल एजेन्सीमा जानुपर्ने बाध्यतता अन्त्य भएदेखि उपभोक्ताहरुले सिधै एयरलाइन्सबाट टिकट खरिद गर्न थालेका छन्।
ट्राभल एजेन्सीहरुको एकाधिकार अन्त्य गर्दै एयरलाइन्स आफैले अनलाइन माध्यम खोलिदिएपछि उपभोक्ताहरु सिधै टिकट खरिद गर्न थालेका हुन्।
पछिल्लो समय यात्रुले सिधै एयरलाइन्सको वेबसाइट, विभिन्न ट्राभल ओटिटी र वालेटबाट खरिद गर्न थालेका छन्। यस्तो संख्या पछिल्लो समय निरन्तर बढीरहेको बुद्ध एयरका प्रबन्धक रुपेश जोशीले बताए।
५० प्रतिशत बजार हिस्सा भएको बुद्ध एयरका ४० प्रतिशत यात्रुले यसरी सिधै टिकट खरिद गर्ने गरेका छन्। बुद्धले आफ्नै वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन तथा वालेटहरुसँग सहकार्यमा यस्तो टिकट बिक्रीको बिकल्प उपलब्ध गराएको छ।
‘हाम्रोमा यसरी सिधै खरिद गर्नेहरु सबैभन्दा बढी इसेवाबाट छन्। त्यसपछि अन्य वालेट तथा हाम्रो वेबसाइट छ’ जोशीले सेतोपाटीसँग भने।
वालेट तथा अन्य माध्यमबाट सिधै टिकट खरिद गर्दा सबै एयरलाइन्सको भाडा एकै ठाउँमा देखिन्छ। यसबाट आफूलाई सस्तो वा महंगो हेरेर खरिद गर्न सहज हुने भएकाले आकर्षण बढिरहेको छ।
संस्थागत रुपमा खरिद हुने टिकट बाहेक अधिकांस सिधै बिक्री हुन थालेका छन्। प्रविधिको पहुँचमा भएकाहरुले व्यक्तीगत टिकट किन्दा सिधै लिने गरेको यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले बताए।
यतीको टिकट बिक्रीमा अनलाइन भुक्तानी तथा सिधै खरिदको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। एयरलाइन्सले ट्राभल एजेन्सी तथा सिधै यात्रुलाई उही मूल्यमा टिकट उपलब्ध गराउने भएपनि यात्रुले आफै तुलना गरेर किन्न पाइने हुँदा अनलाइन माध्यममा आकर्षित भएको उनको बुझाइ छ।
‘हामीले समान मूल्य उपलब्ध गराउछौ। भुक्तानीका हिसाबले कतिपय एजेन्सीहरुले पनि अनलाइनबाटै गर्ने भएकोले औषत ५० प्रतिशत छ’ उनले भने।
कतिपय वालेटहरुले बेला बेलामा छुट तथा अफर पनि ल्याउछन्। यसले गर्दा केही भएपनि छुट पाइने भएकाले अनलाइन माध्यम लोकप्रीय हुँदै गएको श्री एयरलाइन्सका कर्पोरेट डाइरेक्टर अनिल मानन्धरको बुझाइ छ।
‘सजिलो बाहेक सहुलियत पनि हुन्छ। त्यही कारणले पनि यो माध्यम लोकप्रिय हुँदै गएको छ। यसले एयरलाइन्सहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ’ उनले भने। श्री एयरलाइन्सको कूल बिक्रीको आधा भन्दा बढी अनलाइन माध्यमबाट हुने गरेको छ।
यसरी अनलाइन माध्यम सशक्त भएपछि यात्रुसँगै एयरलाइन्सहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ। उनीहरुलाई यात्रुको ट्रेन्ड तत्काल थाहा हुने र त्यसबाट रणनीति बनाउन पनि रियल टाइम डेटा उपलब्ध हुन्छ। त्यस्तै यात्रुले पनि प्रतिस्पर्धी मूल्य छनौटको अधिकार पाउछन्।
भुक्तानी आधा भन्दा बढी अनलाइनबाट
एयरलाइन्सहरुको टिकटको भुक्तानी भने आधा भन्दा बढी अनलाइन माध्यमबाट हुने गरेको छ।
सिधै खरिद गर्ने बाहेक ट्राभल एजेन्सीहरुले पनि गर्ने अनलाइन भुक्तानीको हिसाब गर्दा आधाभन्दा धेरै हुने बुद्ध एयरलका प्रबन्धक रुपेश जोशीले बताए।
बुद्धले वालेट बाहेक आफ्नै वेबसाइटबाट कार्डबाट भुक्तानी गर्नमिल्ने सुविधा पनि ल्याएको छ। यात्रुले सिधै आफ्नो कार्डबाट भुक्तानी गर्नसक्छन्। सामन्य अवस्थामा नेपालमा आन्तरिक टिकट बिक्री १५ अर्ब बढीको हुने गरेको छ। रवीन्द्र शाही/सेतोपाटीबाट
दुबई पुगेको प्रचण्ड परिवार महँगो होटलमा बास…!
काठमाडौँ, १४ साउन । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पत्नी सिता, दुई छोरी र नातिनी सहित दुबई पुगेका छन् । पारिवारिक भ्रमणका लागि दुवई पुगेका प्रचण्ड संसारकै महँगोमध्येमा पर्ने होटेलमा बसेका छन् । मंगलवार बिहान साढे ९ बजे परिवारसहित दुबई उडेका प्रचण्ड दुबईको पाम जुमेरास्थित एट्लान्टिस होटेलमा बस्ने भएका हुन् । नेपाली […]
अन्त्येष्टिको भोलिपल्ट कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछी…
२७ भदौ, पोखरा । कास्कीको पोखरा-५ मालेपाटनकी ४५ वर्षीया महिलाको स्वास्थ्य गम्भीर समस्या भएपछि परिवारका सदस्यले गैह्रापाटनको फिस्टेल अस्पताल पुर्‍याए । बुधबार भर्ना भएकी उनको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेका बेला शुक्रबार मृत्यु भयो । बिहीबार बिहानै स्वाब लिएर परीक्षणका लागि क्षेत्रीय प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । तर रिपोर्ट नआउँदै उनको मृत्यु भयो र अस्पताल प्रशासनले शुक्रबारै […]